About ICO: Na-achịkọta ihe ndị kasị ego n'oge iriba sales - Blockchain News
About ICO: Na-achịkọta ihe ndị kasị ego n'oge iriba sales
N'oge gara aga afọ, ICO bụ ndị kasị ewu ewu na ụzọ na-azụ ego. Ma ndị ọkachamara na-ekwu na anyị ga-ahụ a kpamkpam dị iche iche obibia eduzi iriba ahịa na 2018. Ugbu a, ka na-echeta nke Projects anakọtara kasị ego n'oge ICO-mgbe ụfọdụ, na a ole na ole sekọnd.
EOS – The Kasị Ike Infrastructure maka Decentralized Ngwa
Karịrị $700 nde anakọtara. ICO ka na-aga na
EOS bụ a decentralized ikpo okwu maka mmepe nke decentralized ngwa. Onye Okike nke EOS bụ Dan Larimer. Ọ na-mara dị ka nchoputa nke BitShares, Steem, na BitUSD.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na mmepe kpebiri eduzi fundraising ruo mgbe June 2, 2018. Ọ bụ a bukwanu oge maka ndị dị otú ahụ oru ngo. Ná ngwụsị nke October, na Launch n'ọtụtụ 2017 ogbako Brock Pearce kwuru na EOS si ICO ama dọtara fọrọ nke nta $700 nde ke 345 ụbọchị, na na ọ bụghị ịgba. Dị ka Pearce, a ICO ga-akpọkọta karịa $1 ijeri tupu ọ na-okokụre.
The n'elu ikpo okwu na-ejikwara na blockchain na usoro nke sistemụ maka mmepe. The mgbaru ọsọ bụ isi bụ iji melite arụmọrụ nke ozi teknụzụ (e nweghị ịgba okè, na ike nke ndị dị otú ahụ na usoro na-ejedebeghị naanị ụmụ mmadụ na nsụhọ) na-edozi nsogbu nke blockchain scalability site na ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-ọtụtụ nde na-agba nke na azụmahịa ọtụtụ nde mmadụ kwa abụọ site yiri mgbawa na data nhazi. Ndị a echiche na-adọrọ mmasị. The netwọk ịrụ ọrụ ga-egosi na DPoS (N'inyefe Gosiri nke Eto). nke ahụ bụ, ọ dị mkpa ka ị na-wallet na ụfọdụ mkpụrụ ego niile oge maka azụmahịa na-egosi na blockchain. A ihe ọgụgụ na-apụghị nyere ugbu a, ma ọ nyochaa ụkpụrụ nke naa Ngwuputa, ọ na-aghọ doro anya na ihe ego bụ ndị i nwere, na ihe Ohere ị ga-ahụ a ngọngọ. Nke a na usoro na-ọma ama na mmadụ netwọk Steemit, ebe nkezi oge iji gosi na azụmahịa bụ a di na nwunye nke sekọnd.
FileCoin – A Decentralized Market maka Data Nchekwa
$257 nde anakọtara
FileCoin bụ a decentralized netwọk na ya blockchain maka data nchekwa na nhazi. Ụkpụrụ nke netwọk arụmọrụ nwere ike iji tụnyere Ngwuputa; naanị ihe dị iche bụ ikpo okwu n'ihi na Ngwuputa. Ọrụ enye ohere ha nchekwa n'ọnọdụ FileCoins.
E nwere ụzọ abụọ nke na-eji na netwọk:
Ahịa ịzụta ojii nchekwa ma ọ bụ rịọ ozi ndị dị mkpa si miners ke netwọk na-akwụ maka ọrụ na FileCoins.
Miners enye ọrụ na ohere ha nchekwa maka FileCoins.
FileCoin nwere asọmpi dị ka Storj na Sia. The mbụ oru ngo dabeere Ethereum na nwere nsogbu na scalability, na nke abụọ bụ nnọọ ngwa ngwa nakwa. FileCoin eji ya na netwọk na ogbugba ndu na-emekọ ihe ọrụ na ha data.
$232 nde anakọtara
Tezos bụ a ọhụrụ decentralized onwe-jisiri blockchain usoro na-emepụta a ezi digital obodo. The technology mmemmem iwu nkwenye, nke mathematically egosi na correctness nke arụmọrụ usoro iwu koodu na-enwekwu ndị nche nke kasị siri ma ọ bụ ego dara nha smart contracts.
Yabụ, mmepe ịme ka onye ọzọ na Ethereum na ịkpọsa ntọhapụ nke a ọhụrụ protocol pụrụ iche na-arụ ọrụ na-ala smart contracts. The usoro a na-iji na-emezu isi ihe aga-eme, dị ka nghọta, nche, na ọsọ ọrụ. The asụsụ maka smart contracts, akpọ Michelson, awade a iwu nkwenye usoro n'okpuru ụkpụrụ ahụ na-eji na ụgbọelu ụlọ ọrụ.
N'agbanyeghị ihe ndị a nke ọma ICO, ngo bụ ka na mmalite nke ya mmepe ruru ụfọdụ esịtidem agha. The founders nke ụlọ ọrụ nwere ekemende a agha na ndị president nke Swiss enweta ego, nke nyere fundraising, na investors na-ka na-eche maka ha tokens. Mgbe ndị kasị ndidi ndị ugbua gbara akwụkwọ ọtụtụ emetụtaghị okwu ikpe megide oru ngo.
$150 nde anakọtara
Bancor bụ a decentralized netwọk na-enye gị ohere iji chekwaa Ethereum tokens na-adị mfe tọghata ha n'ime ihe ọ bụla ọzọ tokens enweghị ọzọ na ihe na-akpaghị aka gbakọọ price iji a dị mfe web wallet.
Ndabere nke ngo bụ smart contracts na mma prototype nke Ethereum netwọk na mgbanwe tokens gafere cryptocurrency mgbanwe. Ọ bụ ngwa ngwa, pụrụ ịdabere na, na, ihe kacha mkpa, mma. Azụmahịa na-eme na-enyemaka nke smart contracts. “Magic idu ke mgbakọ na mwepụ na a mfe usoro na aka ekedep na akanyam dị otú ahụ n'ụzọ na mgbe nile liquidity na ndị ahịa na-nọgidere na-enwe n'agbanyeghị nke mpịakọta na mgbanwe Ndepụta,” mmepe ịkọwa.
The rụzuru nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ karịa 50 iriba-ama oru, tinyere Power Ledger, wax Token, Sense, na ndị ọzọ. Ha na-ama sonyeere network Bancor. Nine onye oru ugbua ọrụ ha tokens na ike ịzụta ma na-ere ha site Bancor ngwa. E wezụga BNT (Bancor Network Token), ngwa na-akwado ETH, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, WISH, na IQT. Site n'enyemaka nke smart contracts, netwọk tọghatara 20.7 nde BNT ($58 nde na nkezi ọnụego Bancor).
$100 nde anakọtara
Ọ bụ a kpam kpam ọhụrụ ilekota nke decentralized ngwa (DApps), nke na-enye ọrụ na a ga-adaba adaba interface maka inwe mmekọrịta na-usoro dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ ọrụ nke n'elu ikpo okwu. Ọzọkwa, usoro nwere ike onwe mepụta ọrụ nke a obere akpa, a nchọgharị, na a chat. The dum usoro bụ decentralized na, Ya mere, mma ma na ngwa ngwa.
Ọ bụ na-akpali na mmepe na-ịkụ nzọ na obodo na mmepe nke oru ngo. nke ahụ bụ, mmepe-enye ohere nwe tokens n'obodo ha isonye na mkpebi maka oru ngo development n'agbanyeghị eziokwu na ICO ụkpụrụ na-egosi enweghị ndị dị otú ahụ ikike.
Ọtụtụ decentralized ngwa ama na e debara aha ha n'akwụkwọ n'ime Status, tinyere Gnosis na Aragon.
Gnosis (250,000 ETH anakọtara) bụ a decentralized ikpo okwu maka amụma. Dị ka ọmụmaatụ, amụma nwere ike iji na-ekwu banyere ndị a ma ama, oru nta akuko mkparịta ụka, tupu auction ekwu ọnụ ahịa nke ọrụ nkà, sports ịkụ nzọ, etc.
TenX – Ụka na Wepụta Virtual Ego. Oge obula. n'ebe ọ bụla
$83,1 nde anakọtara
The Singapore ugwo ụlọ ọrụ na-agbalị ime ka ojiji nke cryptocurrencies ka adaba na mfe dị ka ojiji nke fiat ego. Ya mere, ha natara ihu ọma Visa na MasterCard na agbala ha plastic kaadị. The na-eri nke na-esite na kaadị bụ $15, ma i nwere ike ịtụ ya virtual version ke ukara website nakwa. The ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa ala ọrụ ụgwọ maka iji ọrụ ma ọ bụrụ na mmefu na kaadị ndị na-erughị karịa $1,000 kwa afọ. Ọ bụrụ na mmefu na kaadị karịa nke a n'ogo, ọrụ ụgwọ gaghị ebubo.
Naa, usoro na-arụ ọrụ na bitcoin, mgbe ether na gbaara nọ mechiri emechi beta mode. Nkwado nke ERC20 ọkọlọtọ tokens na-kwuru, nke pụtara ndakọrịta na DGX, Ada aba, Ịtụkwasị Obi, NEO, na ndị ọzọ. Gịnị bụ ihe ndị kasị akpali bụ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na a TenX kaadị ọ bụla ụlọ ahịa na-anabata Visa na MasterCard. Ọ bụ nnọọ ekwe oru ngo na-akwado site Vitalik Buterin.
Civic – Secure Identity ilekota
$33 nde anakọtara
Civic Aims na-ewu a eluigwe na ala ilekota na-enye ohere ka ozi ndị dị mkpa a na-achọ. Ya bụ, ọ na-enye ohere njirimara nkwenye ọrụ site blockchain. N'ihi ya, Civic ga-enye mfe na ala ohere ọrụ 'onye data na nyochaa ihe ha bụ.
Ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-enye ndị bi Far East isonye na ụgbọ ala Olee, nke ga-ẹkenịmde na ha. Ọ bụrụ na ndị ume akwado Civic, na ha nwere ike ịlele ma ndị niile sonyere bụ bi a nke mba.
Civic esesịn tọhapụrụ ihe ngwa n'ihi na ya digital identification n'elu ikpo okwu, mara dị ka Civic Secure Identity Platform (iOS version naanị).
Aventus – B2B Ịnye tiketi Infrastructure
$18.7 nde anakọtara
Aventus bụ ngwá ọrụ ike ma na-akwalite tiketi maka dị iche iche na ihe ndị mere na a mma na uzo ụzọ. Ndị na-ahazi nke ihe omume onwe ha adịghị achịkwa tiketi nkesa.
The oru ngo na-enye ohere-echegharị echiche ụkpụrụ nke tiketi nkesa sekọndrị ahịa dị ka nke ọma dị ka iji kpochapụ unregulated mgbasa ozi na iwu na-akwadoghị metụtara ire tiketi. Dị otú ahụ na ngwá ọrụ, ndị na-ahazi ga-enwe ike ịtọ kacha nta na kacha ahịa n'ihi na tiketi na nyochaa ha ije na abụọ ahịa, na-eme ka ahụ dum usoro uzo na ngosi.
Yabụ, ọ bụ a mma Ịnye tiketi usoro. The isi ọrụ nke Aventus bụ ịgbanwe echiche nke tiketi nkesa na-eme ka ọ decentralized, nke ga-ekwe na-akwalite na pụrụ iche na usoro na-ere tiketi maka ihe na-akpaghị aka na-esi na a ọrụ maka ya.
Ugbu a, anyị ga-ege ntị na ọtụtụ ihe ịga nke ọma Russian ICO oru.
MobileGo – The Second Gaming mgbanwe Abịawo
$53 nde anakọtara
Broadband Internet ohere gbanwere ụwa nke egwuregwu. Single mkpọsa na-agwụ ike, na egwuregwu chọrọ mpi na onye ọ bụla ọzọ na ozugbo. The technology nke blockchain ga-eme ka a mgbanwe ke ọtụtụ egwu egwuregwu: ugbu a cybersport asọmpi ga-aghọ onye ọ bụla nwere. Nke a bụ na-ama dị na smart iriba MobileGo, nke ga-ekwe ọtụtụ nde egwuregwu si gburugburu ụwa dịrị n'otu na decentralized tournaments na P2P ọkụ.
Itinye ya ogologo, mmepe chọrọ mụbaa ókè nke e-egwuregwu, nke ga-ekwe niile egwuregwu isonye na asọmpi na hà okwu. Player ga-utịp n'ihi na ụfọdụ rụzuru na ego nwa anụmanụ.
$43 nde anakọtara
The Russian-ejide ụlọ ọrụ malite na Ngwuputa emmepe na Russia, amalite pụrụ iche na kasị elu miners, akpọ Multiclet, ma na-amị Ọwụwa miners.
Isi ihe itunanya echiche nke a ngo bụ ịmepụta otu "ASIC na-eguzogide" egwuputa na ga na-egwupụtakwa a cryptocurrency, ọmụmaatụ, Ethereum, ọtụtụ ugboro ọzọ rụọ ọrụ nke ọma karịa ndịna kaadị na-eji a di ntakiri ego nke ume. Ndị dị otú ahụ na-egosi na-zubere ka-enweta site na mmepe nke a multicellular processor, nke ga-dabeere na yiri ụkpụrụ nke na-ekesa Mgbakọ nke a ndịna-emeputa kaadị mgbawa.
Naa, ụlọ ọrụ na-enye Ọwụwa ASICs ala ọzọ Bitfury ibe. Mmepe nke anụ ụlọ Mgbakọ processor ga-ihe dị ka otu afọ. Oru ngo a pụrụ iwere na Russian mgbanwe ke Ngwuputa.
ins ilekota – The Ihe nri Industry, reinvented
$42.1 nde anakọtara
Nke a mmalite bụ nke mbụ zuru ụwa ọnụ decentralized ilekota na-ejikọ nri na-emepụta na-eji ọkụ na-.
Nzube ya bụ na ndị na-azụ nwere ike si na emeputa ozugbo, gafere Jeriko na ndị ọzọ na intermediaries na-apụghị n'ụzọ zuru ezu na-achịkwa. Retailers-emekarị ihe n'ụzọ gabigara ókè ha ahịa ike: ha overcharge ahịa na-ebelata obere ahịa. Ọ bụ a na-enwekarị nsogbu na ike ga-edozi na ins ilekota.
SONM – Universal foogu Supercomputer
$42 nde anakọtara
The oru ngo na-anọchi anya a echiche nke a decentralized uwa supercomputer maka foogu Mgbakọ. The decentralized sistemụ na Ethereum n'elu ikpo okwu bụ maka mmejuputa Mgbakọ ọrụ na ike. Nke a na usoro bụ a pụrụ iche na ibe nke software na pụrụ iwekota puku ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ nde kọmputa gburugburu ụwa n'ime otu kọmputa netwọk. Nke a ga-eme ka o kwe nweta ndekọ-na-agbasa arụpụta ụdị ọ bụla nke mgbakọ na complexity, ma ọ bụ ịgbakọ ọnụ ọgụgụ nke ụmụ irighiri na a mpempe DNA na nkà mmụta ọgwụ, ma ọ bụ na-eme nnyocha anya ohere, ma ọ bụ na-achọ ọhụrụ ụdị ndụ na Earth na mbara ala ndị ọzọ.
The kasị ego n'oge iriba sales
A isi iyi decenter.org
Previous Post:Olee otú a ga ICO Market agbanwe 2018?